एनआरएन र जनजाति महासंघ युएईको वाकयुद्ध विचमा बुद्ध जयन्ती -
२४ बैशाख २०७४, आईतवार ००:३८ May 7, 2017 wwwmophasalLeaveaComment on एनआरएन र जनजाति महासंघ युएईको वाकयुद्ध विचमा बुद्ध जयन्ती
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ युएई र युएईमा क्रियाशिल ४४ संघसंस्थाहरुको संयुक्त आयोजनामा आगामी मे १२ तारिक शुक्रबारको दिन अबुधाबीमा २,५६१ औं बुद्द जयन्ती मनाईदैछ । राजा सुद्धोधन र आमा मायादेवीको कोखबाट नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका भगवान गौतम बुद्धले २९ वर्षको उमेर गृह त्याग गरी तपस्या गरे पश्चात् भारतको बोधगयामा बैशाख शुक्ल पुर्णिामाका दिन ज्ञान प्राप्त गरेका थिए । त्यस पछी संसार भरमा उनी शान्तिको दूत भगवान बुद्ध भनेर चिनिन्छन ।
विकिपिडियाका अनुसार विश्वभरमा ५० करोड जनसंख्या बुद्द धर्मावलम्बी छन जुन संसारभरको जनसंख्याको ७ प्रतिशत हो । युएईमा बुद्द धर्म मान्ने कती नेपाली होलान ठ्याक्कै भन्न सकिन्न तर हिन्दू धर्म मान्नेहरु पनि विष्णुको नवौ अवतार रुपमा भगवान बुद्दलाई पूजा गर्ने हुँदा २ लाख भन्दा बढी नेपाली नै यो धर्मको अनुयायी हुन भन्दा अन्यथा हुन्न ।
अबुधावीमा हुन गइरहेको २५६१ औ बुद्ध जयन्तिको कार्यक्रम गर्ने र सहभागीको लागि अनुरोध गर्दै नेपाली आदिवासी जनजाती महासंघ युएईका अध्यक्ष डेरराज तमुले पहल गरे । उनले विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई पत्रचार गरे । त्यस पछि बुद्ध जयन्ति युएईमा बुद्ध जयन्ती मनाउने अभियान शुरु भयो । यसलाई भव्य बनाउने अभियानमा विभिन्न संघ संस्थाहरु लागिपरेका छन अहिले ।
यस कार्यक्रमको आयोजकहरुमा नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ युएई, नेपाली समाज, नमस्ते ट्राभल, नेप्लिज सोसल क्लब, नेपाली जन प्रगतिशील मंच, नेपाल विस्व सहयोग संघ, शेर्पा किदुग, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, तमु समाज, गोरखा सेवा समाज, सुनुवार सेवा समाज , नेपाली समुदाय, थारु समाज, काभ्रे सेवा समाज छन् ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार समाज, दलित एकता सञ्जाल, लुम्बिनी वेल्फेर सोसाइटी, पर्वत सेवा समाज, रुपन्देही सेवा समाज, नवलपरासी सेवा समाज, कास्की आदर्श सेवा समाज, सर्लाही सेवा समाज,किरात राई यायोख्या, नेपाल मगर संघ शाखा, लिः ल फङ घले समाज, सिलेट ट्राभल एण्ड टुर्स, चितवन समाज, प्रवासी नेपाली एकता समाज, तामाङ समाज, अल सम्हा टावर क्याफ्टेरिया, अर्घाखाँची सम्पर्क समिति, स्याङ्जा सहयोग समाज, हिमालय वल्र्ड ट्राभल, नेपाली कलाकार समूह, प्रबासी भुजेल समाज सेवा समिति, त्रिशुली समाज, मितेरी समाज, नेपालीको सगरमाथा रेस्टुरेन्ट, माझी समाज, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज लगायत युएईमा क्रियासिल संघ संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा गर्न लागेका हुन ।
शान्तिका अग्रदुत, राष्ट्रिय विभुति भगवान बुद्धको जन्यन्तिको अवसरमा अबुधाबी मलयाली समाजको अबुधाबीको मुसफामा गरिने यस कार्यक्रम र भब्य र ऎतिहासिक हुने आयोजकले जनाएको छ । यो ऐतिहासिक कार्यक्रमको संयोजनको भूमिका नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ युएईले गरेको हो । जनजाती महासंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने यो कार्यक्रमको लागि युएईमा कृयाशिल सबै संघसंस्थालाई अनुरोध गरेको थियो । सोही अनुसार नै ४४ भन्दा बढी संघसंस्था संयुक्त रुपमा बुद्द जयन्ती मनाउदै छन ।
कार्यक्रमका आयोजक समितिका संयोजक सुरेन्द्र थिङ तामाङले ४४ ओटा संस्थाहरु आयोजक रहेको जानकारी दिदै गर्दा एनआरएनए युएई ले किन उक्त कार्यक्रममा आयोजकको समितिमा रहेन ? यो मुख्य चासोको विषय बन्यो ।
यत्रो महान कार्यमा गैर आबासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) किन छुट्यो त ? अहिले बजारमा उठ्ने गरेको प्रश्न यही हो । अथवा एनआरएनएलाई किन छुटाइयो? अझ भनौ एनआरएनएले किन भाग लिएन? लिन दिईएन ? के एनआरएनलाई उक्त कार्यमा हातेमालो गर्न सोही कार्यक्रमका आयोजकहरु नेपाली समाज लगायत बिभिन्न संस्थाहरुको पनि उत्तिकै हात छ ? छैन भने उनिहरु एनआरएनलाई पनि समेट्दैनन ? के आयोजकहरुले एनआरएनएलाई बहिस्कार गरेको हो त ? या एनआरएनए युएई त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन अनिच्छुक देखिएको हो ? यावत प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नै पर्ने भएको छ । र, आयोजकहरुले यी प्रश्नहरुको उत्तर दिनै पर्दछ । जवाफ कस्ले दिने ? जवाफ कस्को सही, कस्को गलत ? तर युएईमा रहेका नेपालीहरु र जुनसुकै देशमा रहेर पनि यो परिस्थितिलाई नियालीरहेका नेपालीहरुलाई सोझो अर्थमा बुझिने जवाफ आउनु पर्दछ ।
माथि उल्लेखित प्रश्नहरुको अन्तर्यमा गएर जवाफ खोज्ने हो भने यसको पृष्‍ठभुमीको बारेमा पनि बहस गर्नु पर्ने हुन्छ । झण्डै एक बर्ष अघी एनआरएनए युएई अध्यक्ष सुदिप कार्कीले बुद्द धर्मावलम्बीहरुले पूजा पाठ, अतिथी सत्कारमा प्रयोग हुने खादालाई बहिस्कार गरेको भनी बिबादमा मुछिए । सो लगतै समाजिक सञ्जालमा उनी लगायत एनआरएनको चर्को विरोध भयो । यही विषयलाई लिएर एनआरएन युएईले आफुहरु स्पष्टिकरण सहितको विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । जसमा भनिएको थियो ‘बौद्ध धर्मलम्बी एवं आदिवासी जनजाति साथीहरुमा यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौ की हाम्रो यो कार्य तपाईहरुको धर्म, संस्कार र विश्वास माथि अंकुस लगाएर दिगभ्रमित गर्नु होईन । बरु जथाभाबी प्रयोगले त्यसको उच्च मुल्यांकन एवं प्रतिष्ठामा आएको आँचलाई न्युनिकरण गरी सधैं उच्च सम्मान स्थापित गर्ने एक मात्र अभिप्सा रहेको कुरा अवगत गराउदछौ ।’
तर जनजाति महासंघ युएईले उक्त विषयले आफ्नो आस्थामा ठेस पुगेको र विज्ञप्तीमा क्षमा याचना नमागेको भन्दै एनआरएनएका कार्यक्रम र सहभागी हुन छोड्यो भनौ बहिस्कार गर्यो । त्यसपछि एनआरएनए युएई र जनजाति महासंघको सम्बन्धमा सुधार हुन सकेन विभिन्न चरणमा विभिन्न छलफलहरु भए पनि निष्कर्षको रुप लिएन । अहिले आएर बुद्ध जयन्तिको कार्यक्रमको आयोजक संस्थाहरु बन्ने क्रममा पनि सो बिषयले प्रबेश पायो साही उक्त विषयले गर्दा नै एनआरएन युएई बुद्ध जयन्तिको कार्यक्रममा सहभागी नभएको देखिन्छ ।
जनजाति महासंघले पत्रचार गरे पछि आफुहरु सहभागी हुने जानकारी सहति पत्रचार गरेको र पछि त्यसको प्रतिउत्तरमा एनआरएनएले खादाको विषयमा माफी नमागे सम्म कार्यक्रममा सहभागी गराउन नसकिने सर्त सहितको जानकारी आएको एनआरएन युएईका अध्यक्ष सुदिप कार्की बताउछन । आफुहरुले खादाको विषयमा विज्ञप्ती निकालेर स्पष्ट पारिसकेको र जनजाति महासंघले पटक पटक एउटै विषयलाई लिएर एनआरएनमाथी विभिन्न लञ्छना लगाउने गरेको उनले बताउछन । उनी भन्छन यदी जनजाति महासंघले एनआरएनए युएई सँगको सहकार्य तोडेको थियो भने हेमन मोक्तानले गरेको साँस्कृतिक कार्यक्रममा किन संयुक्त रुपमा सहभागी भयो आज फेरी मिल्दैन भन्ने ? उनले के एनआरएनलाई युएईमा क्रियाशिल अन्य संघसंस्थाहरुले (जो उक्त आयोजक समितिमा छन) सहकार्य गर्न छोडेको हो ?
यता जनजाति महासंघ युएईले भने खादा बहिस्कार गर्ने अभिव्यक्तिको विषयमा माफी नमागे सम्म एनआएनए युएई को यो कार्यकाल सँग सहकार्य हुन नसक्ने जानकारी गराएको छ । बुद्ध जयन्ति कार्यक्रमका आयोजक समिति संयोजक सुरेन्द्र थिङ तामाङले आफुहरु एनआरएनए युएईलाई पनि सहभागी गराएर कार्यक्रम गर्ने उद्देश्य राखेको तर सो अनुरुप एनआरएन उपस्थित हुन नसकोको बताए ।
यसरी हेर्दा जनजाति र एनआएनको विषयमा अन्य संघ संस्थाहरु पनि तानिएको देखिन्छ । हुनत जनजाति र एनआरएनको उक्त विषयलाई समाधान गर्न पटक पटक भएका छलफलहरु निष्कर्ष विहिन भए । सोही कार्यक्रमको मुल आयोजक समितिका सदस्य गोविन्द ढकालले आफुहरु एनआरएनलाई बहिस्कार नगरेको बताउछन । आफुहरु गम्भिर रहेको एनआरएन सहितको कार्यक्रम मनाउन कोशिश गरेको तर उही विवादले गर्दा समस्या आएको बताए । जनजाती महासंघले उक्त अभियान शुरु गरेको हुनाले आफुहरु केही परिबन्धमा परेको पनि उनले स्विाकार गरे ।
युएईमा रहेको जेठो संस्था नेपाली समाज र एनआरएनए युएई विच पनि कुन संस्था ठुलो, संस्था प्रमुख हुनुपर्ने र एकले संयोजन गरेको कार्यक्रममा अर्को नजाने जस्ता अघोषित समस्याहरु देखिने गरेको थियो । ४४ ओटा संस्थाहरु आयोजक रहेको उक्त महान कार्यमा एनआरएनए युएई संग मतभेद राख्ने जनजाति महासंघ र सो अन्र्तगतका ११ ओटा संस्था रहेका थिए । अन्य संघ संस्थाहरुले पनि एनआरएनलाई उक्त महान कार्यमा सहभागी गराउन चाहेनन वा एनआरएनले उनीहरुको मन जित्न सकेन? वा युएईमा क्रियाशिल संघसंस्थाहरुलाई एनआरएनले विश्वासमा लिन सकेन ।
अब यसरी हेर्दा उक्त कार्यक्रममा एनआरएन युएई सहभागी नहुने देखिन्छ । तर सोही कार्यक्रमको मुल आयोजक समितिमा एनआरएनका सल्लाहकारहरु एकेन्द्र थापा र सालिक सुवेदी पनि रहेका छन । आफ्नै संस्थाका सल्लाहकारहरु मुल आयोजक समितिमा रहेको कार्यक्रममा संस्था सहभागी नहुनु सल्लाहकारहरुको कमजोरी हो वा एनआरएनका सल्लाहकारहरुले दिएको सल्लाह एनआरएन कार्यसमितिले सम्बोधन गर्देन ? उनीहरु पनि खादा प्रकरणले नै मुल जड भएको बताउछन ।
यो कार्यक्रममा एनआरएन सहभागी नहुनुले धेरै प्रश्नहरु सृजित गरेको छ । के जनजाति महासंघले बुद्ध जयन्ति जस्को कार्यक्रममा एनआरएनलाई पत्रचार गरेर पछि शर्त राख्नु सही थियो ? के उक्त कार्यक्रममा आयोजक भएका ४४ नेपाली संस्थाहरुले एनआरएनलाई बहिस्कार गरेका हुन ? के एनआरएनले खादा को विषयमा जनजाति महासंघले भने जसरी माफी माग्न नसक्ने हो वा चाहदैन ? अनि एउटा संस्थाले अर्को संस्था र समाजलाई बहिस्कार गर्दै जाने हो भने युएईमा रहेका नेपाली विचमा आउने विभाजनको असर कस्ले भोग्नु पर्छ ? जवाफ दिने को हो ? सबै आफ्नै तर्कलाई सही भन्दै हिडेपछि सहमती कसरी हुन्छ ?
हुनत धर्म संस्कृति अफ्नै आफ्नै तरिकाले स्वतन्त्र रुपमा मनाउन सकिने कुरा हो । तर २ लाख भन्दा माथी नेपाली भएको युएईमा रहेका संघ संस्थाहरु विचमा आपसी सम्बन्धहरु सुमधुर नभएको सवालमा विभाजन आउछ र त्यसले विभिन्न चरणमा समस्या समाधान हुनुको साटो झन समस्या बल्झाउन सक्छ त्यसैले नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरुले संवेदनशिल बनेर सोच्नु आवश्यक छ । जसले युएईका नेपालीहरुलाई एकबद्ध गर्दै विभिन्न समयमा आउने समस्याहरु समाधान र विभिन्न सामाजिक संस्कृतिक कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बन्न सकुन ।
शान्तिका अग्रदुत भगवान गौतम बुद्धले आफ्नो उपदेशमा ‘क्षमा दिनु महान’ भन्ने नैतिकता सिकाईरहँदा युएईका धर्मावलम्बी आयोजकहरुले भने क्षमा दिन सकेनन । ‘तपाईंलाई तपाईंको रिसको लागि कसैले दण्डित गर्दैन तर आफ्नै रिसले दण्डित गर्ने छ’ भन्ने भगवान बुद्दको उपदेश सुनिरहदा बुद्ध जयन्ती मनाउने कार्यक्रममा नै भएको यस्तो विभाजनले हामीलाई न्याय देला र?
मेघराज सापकोटाको सहयोगमा
जोहेब मान्न्धरले नया म्युजिक भिडियो सार्बजनिक गरे (भिडियो)
फेसन फ्युजन— २०१७ को तयारि तिब्र , अडिसन सकियो